प्रधानमन्त्रीज्यू सबैभन्दा पहिला फेर्ने कि राराकै मुहार ? पूर्वाधार, विद्युत् र उद्योग एकैपटक नलगे फेरिदैन यसको मुहार !
| 2018-04-14 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । नयाँ वर्षकै दिन नयाँ कामको थालनी, त्यो पनि देशको दूरदराजका रुपमा गणना गरिएको कर्णालीको रारा तालबाट मुलुकका नाममा सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णालीबासी जनतासहित आम नेपालीलाई नयाँ सन्देश दिन सफल भएका छन् ।
रारा पर्यटन वर्ष २०७५ को उद्घाटन समेत गर्दै प्रम ओलीले भने, ‘पाँच वर्षभित्रैमा देशको मुहार स्पष्ट अनुभूत हुने गरी बदलिने छ, सकारात्मक दिशामा लागौं । हामी सबै जुटौं ।’
रारा एक: सम्भावना अनेक
देशमा दर्जनौं प्रधानमन्त्री यस अघि पनि भए, तर कुनै पनि कार्यकारी प्रमुखले यस खाले कार्यक्रम रारामै आएर गरेका थिएनन् ।
राराको किनारामा बसेर विकासे सम्बोधन गरेका ओलीले आफ्नो उपस्थितिलाई पनि यस क्षेत्रको विकासका लागि दिएको प्राथमिकताका रुपमा अथ्र्याएका छन् ।
राराताल मुगुकै मात्र मुहार फेर्ने प्राकृतिक सम्पदा होइन ।
प्रधानमन्त्रीले बोलेजस्तै ५ वर्ष भित्र नेपालकै मुहार फेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले यही कर्णाली अर्थात् राराकै मुहार फेर्न जरुरी रहेको यहाँको विज्ञहरु बताउँछन् ।
केही दिनदेखि आन्तरिक पर्यटकको मात्रा समेत बढ्दै जान थालेको रारा क्षेत्रको विकास गर्न सकेमा साँच्चिकै देशकै मुहार बदलिन सक्ने सम्भावना पनि प्रशस्तै छन् ।
रारा नेपालको सबैभन्दा ठूलो र प्रसिद्ध ताल हो । कर्णाली अञ्चलको मुगु जिल्लामा अवस्थित यो ताल समुद्र सतहदेखि २,९७२ मिटर उचाइमा रहेको छ ।
१०.८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको रारा तालको अधिकतम लम्वाई ५ किलोमिटर र अधिकतम चौडाई ३.२ किलोमिटर रहेको बताइन्छ ।
गहिराइ भने १६७ मिटर रहेको छ । यहाँ पुगेपछि स्वर्गकै टुक्रा जस्तो लाग्ने रारा क्षेत्र प्रकृतिको उपहारकै रुपमा लिइन्छ ।
यो पर्यटन तथा पर्यावरणीय उद्योग तथा विश्वविद्यालयकै केन्द्र बन्ने कुरा आजभन्दा ६० वर्ष अघि नेपाल आएका युरोपियन भूगर्भ वैज्ञानिक टोनी हेगनले समेत औंल्याएका थिए ।
रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको मनोरम हरियाली भित्र कस्तुरी, रतुवा जस्ता जन्तुहरू मात्र नभई राष्ट्रिय चरा डाँफे पनि पाइन्छ, जहाँ १०६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि फैलिएको छ ।
रारातालको किनाराबाट सम्बोधन गर्दै गर्दा प्रम ओलीको नारा ‘सुखी नेपाल समृद्ध नेपाली’को एउटा झल्को त्यहाँ पोखिएको महसुस हुन्थ्यो । तर, के कर्णाली क्षेत्रको विकास एक दिन रारामा गएर सम्बोधन गर्दैमा पूरा हुन सक्ला त ?
कर्णाली राजमार्गलाई नबनाइ बन्दैन रारा
प्रधानमन्त्री ओलीले ५ वर्षमा मुलुककै मुहार फेर्ने बताइरहँदा रारासम्म पुग्ने राम्रो सडक अभावका कारण आफैं हेलिकोप्टरबाट त्यहाँ अवतरण गरेका थिए भन्ने सायद उनैलाई पनि याद होला ।
दशक अघि सुरु भएको कर्णाली राजमार्ग आज मुत्यु मार्गका रुपमा चिनिन्छ । यसको अवस्था हेर्दा प्रम ओलीले भने जस्तो ५ वर्षमा त के यही अवस्था रहिरहने हो भने ५० वर्षमा पनि मुहार फेरिने देखिदैन ।
किनकि, कर्णालीको नाउँ गरेर यस अघि धेरैले धेरैपटक मुहार फेर्ने आश्वासन नदिएका होइनन् । कर्णालीमा बाटोघाटो, शुद्ध खानेपानि पुग्न सकेको छैन भने कर्णालीका बालबलिकाले शिक्षा पाउन सकिरहेका छैनन् ।
कर्णालीका कतिपय गाउँमा स्वास्थ्य चौकी समेत नहुँदा कयौँ मानिसले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् । हरेक वर्ष ३ दर्जन बढी सुत्केरी महिला समयमै उपचार नपाएकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
त्यस्तै, उचित शिक्षा अभावमा यहाँ सामाजिक भेदभाव पनि व्याप्त छ । कर्णालीमा छुवाछूत, अन्धविश्वासको मात्रा कति छ भन्ने जान्न यहाँ रहने अन्धविश्वासमा आधारित विभिन्न फिल्म हेर्दा नै थाह हुन्छ ।
बाटो र बत्ती विकासको पहिलो सर्त
कर्णाली प्रदेशको साबिकको राजधानी जुम्लादेखि सुर्खेत जोड्ने करिब २ सय ३२ किलोमिटर सडक सुरु भएको १२ वर्ष बितिसक्ता पनि अवस्था फेरिएको छैन ।
सबैभन्दा ठूलो तर सबैभन्दा कम विकसित प्रदेश हो कर्णाली भन्ने कुरा सबैलाई थाहै छ । तर, कृषि, पर्यटन तथा औद्योगिक हिसाबले अनन्त सम्भावना रहेको क्षेत्र पनि यही हो भन्ने बुझ्न इतिहासले बताउने तत्कालीन उपल्लो कर्णाली र तिब्बतको व्यापार तथा समृद्धिलाई हेर्दा पत्ता लाग्छ नै ।
आर्थिक वर्ष ०६७-६८ देखि ०७३-७४ सम्ममा मात्रै ३३० सवारी दुर्घटनामा ३०९ जनाको मृत्यु र ५५४ जना घाइते भइसकेका छन् यो सडकमा ।
ठेकेदार र सडक डिभिजनको लापरवाहीले राजमार्गमा बन्दै गरेका करिब दुई दर्जन पक्की पुल निर्माण अलपत्र पर्दा यात्रा झन् सकस बनिरहेको छ ।
विकास र निकास दुवै नपाएर गाँजिएको यो क्षेत्रले आफ्नो उन्मुक्ति खोजिरहेकै बेला प्रम ओलीले बोलेको कुरा कसरी हुन्छ पूरा भन्ने चिन्ता पनि उठेको छ ।
अब बाटो मात्रैले हुँदैन विकास– अर्थविद् ढकाल
नेपालको अर्थतन्त्रबारे स्पष्ट फरक विश्लेषण गर्दै आएका अर्थविद् तेज बहादुर ढकालले प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीलाई सफल बनाउने बारे पनि फरक आइडिया सुझाएका छन् ।
निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै अर्थविद् ढकाल भन्छन्, ‘अबको पूर्वाधार विकास गाउँका डाँडा भत्काउन डोजर लगाएर गरिने विकासको अब कुनै अर्थ छैन ।
न त सबै भन्दा पहिले बाटो पुराऔं अनि विकास त आफसे आफ हुन्छ भनेर विकास हुनेवाला छ । समृद्धिको सपना त परै जाओस् ।’
‘इन्टिग्रेटेड’ विकास मोडेलको प्रवक्ता ढकालले बाटो मात्रै लैजादा त्यहाँका जनता बसाइ सरेर सुगम भएतिर जाने र गाउँ रित्तिने क्रम बढेकोबाट पाठ सिक्नु पर्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘त्यसैले जनताले त बाटो मात्रै खोजेका त हैन रहेछन् भन्ने बुझ्नु परो । त्यही भूमिलाई बनाउन त जनतालाई त्यही टिकाइराख्ने गरी विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यो भनेको बाटो, बत्ती र उद्योग सँगसँगै नै लैजाने हो । एउटा १० वर्ष अघि पुग्ने, अर्काे १० वर्ष पछि पुग्दा उद्योग लैजाने बेला गाउँ नै रित्तो हुने अवस्था बिर्सन मिल्दैन ।’
उनी नेपालको तीव्र विकासका लागि परम्परागत विकासे तौर बदल्नु पर्ने धारका अर्थशास्त्री हुन् ।
शनिबार, १ वैशाख २०७५